Google Assistant ပါတဲ့ Smart Display – DigitalTimes.com.mm
95 Shares 66 Views
Google က သူ့ရဲ့ Assistant ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိုယ်ရေးလက်ထောက်ကို Smart Displays များမှာ ထည့်သွင်းလာကြမယ်လို့ ဇန်န၀ါရီလမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Amazon Echo Show ရဲ့ ပြိုင်ဖက်များစွာ ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile World Congress မှာ ဂူဂယ်လ်က သူ့ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို သုံးမယ့် ဟာ့ဒ်ဝဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြင်သစ် အခြေစိုက် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီ Archos ဖြစ်ပါတယ်။
Archos က အခုတော့ Google Assistant ပါတဲ့ စမတ် မျက်နှာပြင်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်မှာ Archos Hello ဖြစ်ပြီး သူ့ကို အသံဖြင့် ခိုင်းစေခြင်းဖြင့် စမတ်နေအိမ် ကိရိယာများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ သီချင်းများ ဖွင့်ခြင်း၊ ရာသီဥတု သတင်းအချက်အလက်များကို ပြောခိုင်းခြင်း အပါအ၀င် အလုပ်များစွာကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူက အသံထွက်၍ မေးမြန်းတာတွေကို ဖြေကြားပေးနိုင်သလို သူ့မှာ ပါတဲ့ Display ကနေလည်း သတင်းအချက်အလက်များကို ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ထားရင် သူက ဟင်းချက်နည်းများကို ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ကနေ ရုံးကို သွားဖို့အတွက် ကားအရှင်းဆုံး လမ်းကြောင်းကို သူက Google Map ကနေ ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
Hello ဟာ ဒီဇိုင်းလှပပါတယ်။ သူ့မှာ Stand ပါပါတယ်။ ၈.၄ လက်မ FHD or ၇ လက်မ HD Display များ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ စပီကာတစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူ့မှာ Android Oreo ပါရှိပါတယ်။ Quad-Core Processor , 2GB RAM , 16GB Storage များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ၇ လက်မ မော်ဒယ်ကို ဒေါ်လာ ၁၆၀ နဲ့ ၈. ၄ လက်မ မော်ဒယ်ကို ၂၂၂ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Google က သူ့ရဲ့ Assistant ဒဈဂဈြတယျ ကိုယျရေးလကျထောကျကို Smart Displays မြားမှာ ထညျ့သှငျးလာကွမယျလို့ ဇနျနဝါရီလမှာ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ Amazon Echo Show ရဲ့ ပွိုငျဖကျမြားစှာ ထှကျပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ Mobile World Congress မှာ ဂူဂယျလျက သူ့ရဲ့ ဆော့ဖျဝဲကို သုံးမယျ့ ဟာ့ဒျဝဲ ကုမ်ပဏီတဈခုကို ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ပွငျသဈ အခွစေိုကျ အီလကျထရောနဈ ကုမ်ပဏီ Archos ဖွဈပါတယျ။
Archos က အခုတော့ Google Assistant ပါတဲ့ စမတျ မကျြနှာပွငျကို မိတျဆကျလိုကျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အမညျမှာ Archos Hello ဖွဈပွီး သူ့ကို အသံဖွငျ့ ခိုငျးစခွေငျးဖွငျ့ စမတျနအေိမျ ကိရိယာမြားကို ထိနျးခြုပျခွငျး၊ သီခငျြးမြား ဖှငျ့ခွငျး၊ ရာသီဥတု သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပွောခိုငျးခွငျး အပါအဝငျ အလုပျမြားစှာကို ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ သူက အသံထှကျ၍ မေးမွနျးတာတှကေို ဖွကွေားပေးနိုငျသလို သူ့မှာ ပါတဲ့ Display ကနလေညျး သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပွသပေးနိုငျပါတယျ။ သူ့ကို မီးဖိုခြောငျထဲမှာ ထားရငျ သူက ဟငျးခကျြနညျးမြားကို ပွောပွပေးနိုငျပါတယျ။ အိမျကနေ ရုံးကို သှားဖို့အတှကျ ကားအရှငျးဆုံး လမျးကွောငျးကို သူက Google Map ကနေ ပွသပေးနိုငျပါတယျ။
Hello ဟာ ဒီဇိုငျးလှပပါတယျ။ သူ့မှာ Stand ပါပါတယျ။ ၈.၄ လကျမ FHD or ၇ လကျမ HD Display မြား ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ စပီကာတဈခုလညျး ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ သူ့မှာ Android Oreo ပါရှိပါတယျ။ Quad-Core Processor , 2GB RAM , 16GB Storage မြား ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ၇ လကျမ မျောဒယျကို ဒျေါလာ ၁၆၀ နဲ့ ၈. ၄ လကျမ မျောဒယျကို ၂၂၂ ဒျေါလာ သတျမှတျထားပါတယျ။